नेपाल आज | महिला/केटीहरुले पुरुष/केटाहरुलाई कहिलै नवाताउँने ५ कुरा !
भनिन्छ महिला र युवतीको जिन्दगीमा धेरै राज हुन्छन् । महिलाको जिन्दगी रहस्यको पर्याय हुन्छ। महिलाको दिमागमा जे चल्छ, त्यो पढ्न सक्नु मुस्किल होईन असम्भव छ । अर्थात केटिहरु आफनो पुरुष साथीवाट धेरै कुरा लुकाउँछन् । यस्तो यसकार होईन की– उनीहरु डराउँछन् । यस्तो यस कारण हुन्छ की उनीहरु जिन्दगीका यस्ता कुरासँग धेरै जेलिएका हुन्छन् ।
सोसल मिडियामा हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलासँग एउटा प्रश्न सोधियो ‘यस्तो कुन कुरा छ जुन उनीहरु आफनो पति वा ब्वाईफे्रण्डसँग लुकाउन चाहान्छन् ?’ यो सर्भे रिपोर्टमा यस्तो कुरा अगाडि आयो की जुन कुरा महिलाहरु कुनै पनि सर्तमा आफनो साथीलाई वताउँदैनन् ।
आफनो अफेयरको वारेमा
तपाईलाई लाग्न सक्छ, तपाईकी पत्नि वा गर्लफे्रण्ड तपाईसँग हुँदा मात्रै सवै भन्दा सन्तुस्ट भएकी छिन् । तर, तपाई गलत पनि हुन सक्नु हुन्छ । के थाहा उनले ति खास अनुभवलाई तपाईसँग लुकाएकी छिन् की ? यस्तो यसकारण की महिलाहरु आफनो छवीलाई लिएर धेरै सतर्क रहन्छन् । कसैले पनि आफनो छवि गलत वनाओस भनेर उनीहरु चाहँदैनन् । दोश्रो कुरा धेरै ब्यवहारीक छ। महिला/केटी प्रायः आफनो प्रमे प्रसंग लुकाउँछन् । किनकी उनीहरु आफुसँग भएको केटा साथीलाई असहज होस भन्ने चाँहदैनन् । प्राय गरी पुरुषहरुलाई गर्लफे्रण्डको पुर्व प्रेमीभन्दा असल छु भन्ने भन्ने वुझन उत्सुक हुन्छन् । तर, महिला/केटीहरुलाई यो कुरा पटक्कै मन पर्दैन ।
महिला/केटिहरु आफना साथीसँग कस्तो र कुन कुरा गर्छन, यो कुरा तपाई कहिलै वुझन सक्नु हुन्न । जुन कुरा पुरुषसँग वताउन उनीहरु हिचकिचाउँछन्, त्यहि कुरा उनीहरु आफना साथीसँग वडो आरामले सुनाउँछन् । आफनो मात्र होईन उनीहरु आफना साथीको राजको कुरा पनि आफनो पति/ब्वाईफ्रेण्डसँग लुकाउँछन् ।
महिलाहरु कहिलै पनि आफनो मेकअप सीक्रेटको वारेमा पति/ब्वाईफ्रेण्डलाई जानकारी होस भन्ने कहिलै पनि चाहाँदैनन् । किनकी आफनो सुन्दरताका लागि के के गर्छन भन्ने कुरा पुरुषलाई जानकारी नहोस भन्ने महिलाहरु चाहन्छन् ।
पुर्व प्रेमीको कुरा
कसैले भनाई छ– प्रेममा नै महिलाको अस्तित्व हुन्छ । तपाईलाई यो पनि जानकारी छ की तपाई भन्दा पहिला पनि उसको जिन्दगी थियो । अनि यो पनि स्वभाविक छ की तपाई भन्दा पहिला उसेको जिन्दगी पक्कै पनि महिलाको विचमा मात्रै वितेको छैन । तर, उसको अतितको वारेमा तपाई जान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सम्हालिनुहोस। किनकी महिलाहरु यस्तो कुरा वताउँन चाहँदैनन् । सर्भेको समयमा अधिकांश महिला/केटीहरुले वताएका छन की उनीहरु पुर्व प्रमीसँग जोडिएकाेि कुनै पनि सत्य कुरा वताउँदैनन् । वास्तवमा उनीहरु चाहान्छन की अतिको कारण वर्तमान खराव नहोस।
आफनो परिवार/माईतीसँग जोडिएको कुरा
धेरैजसो महिला/केटीहरु आफनो पति/ब्वाईफ्रेण्डको अगाडि आफनो परिवार/माईतीको छविलाई लिएर धेरै सजग हुन्छन् । आफनी वहिनी, आफनी आमा वा आफनो परिवारको छविसँग जोडिएको हुनै पनि कुरा गोप्य रोख्न उनीहरु कुनै पनि कसर वाँकी राख्दैनन् । तर एउटा सत्य कुरा त यो पनि हो की महिला/केटीहरु जुवानको कच्चा हुन्छन् ।